CIQAAB: Chelsea Waa In SAGAAL Dhibcood Laga Jaro, SADDEX Ciyaarood Garoon Madhan Ku Dheesho, Ciqaabtuna Ka Adkaato Lacagta | Burconews
CIQAAB: Chelsea Waa In SAGAAL Dhibcood Laga Jaro, SADDEX Ciyaarood Garoon Madhan Ku Dheesho, Ciqaabtuna Ka Adkaato Lacagta
Burconews:- Xidhiidhka kubadda cagta waddanka Ingiriiska ayaa loo soo jeediyey talo ciqaabeed oo ka dhan ah kooxda Chelsea oo taageereyaasheedu cusnuriyad kula kaceen ciyaaryahanno madow ah xili ciyaareedkan.
FA-ga ayaa loo soo jeediyey in sagaal dhibcood ay si toos ah uga jiraan dhibcaha ay haysato Chelsea oo hadda kaalinta afraad kaga jirta liiska kala sarraynta kooxaha horyaalka Premier League, isla markaana ay saddex kulan ku ciyaarto garoon madhan oo aanay wax taageereyaal ah joogin.
Blues ayaa ay jamaahiirteedu xili ciyaareedkan cunsuriyad kala kaceen laacibka xulka qaranka England ee Raheem Sterling, kulankii ugu dambeeyey ee Man City ay booqatay garoonka Stamford Bridge, laakiin wax tallaabo ah oo u dhiganta dembiga ay ka galeen ciyaartoygan wali laguma ridin.
Waraysi uu siiyey wargeyska Times, ayaa uu Raheem Sterling ku dalbaday in ciqaab adag lagu rido Chelsea, waxaana uu usoo jeediyey xidhiidhka Ingiriiska ee FA in ganaax lacageed aanu joojinaynin cunsuriyadda ka dhanka ah madowga.
“Ilama aha in xalku yahay in garoonka laga baxo, laakiin waa inaan ciyaaryahannada la ciqaabin. Ciqaabtu waa inay ka adkaato lacagta, sababtoo ah ganaaxa lacagtu ma dhaawaco kooxaha taajiriinta ah ama xidhiidhada kubadda cagta. Waxaan soo jeedin lahaa in sagaal dhibcood ay si toos ah ugaga go’aan cunsuriyadda lagula kaco ciyaaryahannada. Waxay u muuqanaysaa mid adag, laakiin taageerahee dhaqan cunsuriyad ah khatar isku gelinaya haddii kooxdoodu ay dib ugu laabato heerka labaad amaba ay ka hadho ku tartankii horyaalka?” Sidaas waxa yidhi Raheem Sterling oo ku taliyey in Chelsea laga jaro sagaal dhibcood, sidoo kalena kooxaha kale ee sameeya cunsuriyad sidaas oo kale loola dhaqmo.
“Sidaas oo kale, kooxdu waa inay saddex ciyaarood garoon hoosta ka xidhan ku dheesho (garoon madhan). Jidkaas ayay ku waayayaan dakhli, waxaanay u noqonaysaa cawaaqib la xidhiidha ficilkii cunsuriyadda.” Ayuu Raheem yidhi mar kale.